डा. केसीको समर्थनमा वसन्तपुरमा सामुहिक सत्याग्रह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — केसीको समर्थनमा ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ को आयोजनामा आइतबार बिहान वसन्तपुर डबलीमा आमनागरिकको सहभागितामा सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ । सत्याग्रहमा अधिवक्ता अाेमप्रकाश अर्याल, कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरुकफ पनि सहभागिता रहेको अायोजकले बताएको छ ।
केही समय अघिसम्म १०० जना बढीले सत्याग्रहमा बस्नका लागि नाम टिपाएर अनसनमा बसेका छन्। शनिबार अलायन्सले नयाँ बानेश्वरमा गरेको कोणसभामा नागरिक सत्याग्रहको घोषणा गर्दा २६० बढीले आफ्नो नाम टिपाएको आयोजकले जानकारी दिएको छ।
सत्याग्रह बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म जारी रहने बताइएको छ।सत्याग्रहमा एेक्यबद्धता जनाउन कांग्रेस नेता गगन थापा पनि पुगेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ११:४६
श्रावण ६, २०७५ माधव अर्याल
पाल्पा — सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तिनाउ गाँउपालिका–३ दोभानबजार नजिकै ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
तानसेनबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको ना ३ ख ट्रक १००८ ट्रकले अगाडि गुडिरहेको लु२१प ९६८० नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए।
दुर्घटनामामाथागढी–२ आँपटारीका ४० वर्षीय माधव कुमाल र सोही स्थानका १९ वर्षीय उमेश कुमालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।उनका अनुसार मोटरसाइकलमा सवारी दुबै जनाको शव तिनाउ खोलाको छेउमा रहेको छ।
ठूलो भीरको दुई सय मिटर तल खोलाको छेउमा पुगेकाले निकाल्न केही कठिनाई भएको छ। डोरीको सहायताबाट शव निकाल्ने तयारी गरिएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको घिमिरेले बताए। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकल सडक छेउमा अड्किएको छ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ११:४५